အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ: ဘယ်မှာစတင်ရန်? – တေလာ Lopes ツဘလော့
အကယ်စင်စစ်ငါသည်သင်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူသင့်တယ်ဘယ်လိုသင်ပြောပြဖို့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်ဘူး, အိုကေ? ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကမျှဝေဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့လိမ့်မယ်ထင် “ပစ္စည်းပစ္စယ” ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်ကြသူ. ဘာဖွစျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံသင်တို့ကဲ့သို့, ငါအခြေအနေများဘယ်မှာအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရှာတွေ့နိုင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ “အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ” ဒါဟာလိုအပ်ချက်တစ်ခုကိစ္စဖြစ်ပါသည်. ယနေ့ငါ့အပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိန်ခေါ်မှုခဲ့, ထိုမှတပါး, လွယ်ကူသော. သို့ရာတွင်, အကယ်. ပိုမိုနီးကပ်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏တဲ့သီလဖြစ်ပါတယ်.
ကြီးမားစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) စာအုပ်များ, လဲ tutorial, ဗီဒီယိုများနှင့်လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ပါကအင်တာနက်ဖိုရမ်များ, တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြုလုပ်ရုံကြောင့်ဘာသာစကားနားလည်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့်ပျော်မွေ့မပြည့်စုံစွန့်ပစ်ဖြစ်ဖို့ရရှိသွားတဲ့. ရှင်းလင်းသော, သငျသညျအင်္ဂလိပ်မသိဘဲကွယ်ပျောက်ရနိုင်, သင်ကကျွမ်းကျင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေမယ့်သေချာပေါက်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်, ပင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း.
ဒါကတံခါးပိတ်နှင့်အသစ် Post ကိုသတင်းအချက်အလက်အချိန်ကျော်ကဆက်ပြောသည်စေခြင်းငှါမထားဘူး, ထိုကွောငျ့, သင်တစ်ဦးအေးမြအစွန်အဖျားရှိပါက, မှတ်ချက်များအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားစေ. ငါသူတို့အားက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမဆက်သွယ်မှုရှိသည်နှင့်၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုသက်သေမပြနိုင်သည်ကိုသတိရ. ထိုအခါ, ဘယ်မှာစတင်ရန်ထို့နောက်တွေ့မြင်, ဆက်လုပ်!
ပါမောက္ခ A.J. အဆိုအရ. မြင့်သော, ညွှန်ကြားရေးမှူး “သက်သာအင်္ဂလိပ်”, အဲဒီမှာ7တကယ်ချင်သောသူတို့အဘို့အခြေခံစည်းမျဉ်းများ “အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်”. ငါနည်းလမ်းများစွာအတွက်အထူးသဖြင့်တရားဝင်တွေ့ရှိခဲ့, အမှန်, ဖတ်နေထက်ပြောနေတာစိတ်ဝင်စားသောသူတို့အဘို့ကိုပိုဂီယာ, မည်သည့်စမ်းသပ်မှုများရေးရန်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်. အဖြစ်7စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဒီ link ပေါ်တွင်ဆရာဖွငျ့ဗီဒီယိုများအတွက်အသေးစိတ်နေကြတယ် http://www.effortlessenglishpage.com/p/7-rules.html, နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော:
ဥပဒေ 1 – တစ်ဦးချင်းစီစကားအားဖြင့်စာပိုဒ်တိုများနှင့်မလေ့လာပါ. အထီးကျန်စကားလုံးများကိုအလှဆင်ဖို့ကြိုးစားနေထက်ပြည့်စုံစာကြောင်းများသုံးပြီးဝေါဟာရတည်ဆောက်ရန်ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်, အားလုံးအပြီး, စာကြောင်းစကားလုံးများကို၏အုပ်စုတစုကဖွဲ့စည်းနှင့်တစ်ခုတည်းစကားများစာရင်းတစ်ခုထက် ပို. အဓိပ္ပာယ်ပါစေနှင့် disjointed နေကြတယ်. သငျသညျအင်္ဂလိပ်တှငျစစျမှနျသောပုံပြင်များ၏ podcasts တွေကိုသို့မဟုတ်စာအုပ်များတွင်ဤစာပိုဒ်တိုများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. သငျသညျစကားများစာရင်းကိုအလွတ်ကျက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး. သငျသညျသစ်တစ်ခုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနား ထောင်. သို့မဟုတ်ကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါသင်အမှန်တကယ်အင်္ဂလိပ်စကားကိုနားထောငျနှင့်, ရေး. ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုသာစကားလုံးမရေးမ, သငျသညျရှိကွောငျးတစျခုလုံးထားသောစာပိုဒ်တိုများသို့မဟုတ်ဝါကျကိုရေးသင့်တယ်. ထိုအခါ, အစားဟု၏ “မုန်းထား” သို့မဟုတ်ပဲရေးလိုက် “မုန်းထား”, သငျသညျဆိုသညျကားရေး “ယောဟနျသရေခဲမုန့်ကိုမုန်း”. သငျသညျတပြင်လုံးကိုဝါကျကိုရေး. စာပိုဒ်တိုများကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပိုသတင်းအချက်အလက်ပေးနဲ့မှတ်မိဖို့ပိုလွယ်များမှာ, သူတို့အဓိပ်ပာယျကြောင့်, သူတို့ပုံရိပ်ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာရှိ, ပုံပြင်တစ်ပုဒ်. သငျသညျစာပိုဒ်တိုများလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာ, သင်သည်လည်းသဒ္ဒါကိုသင်ယူနေကြသည်. ယခင်ဝါကျအတွက်မှတ်ချက်, “မုန်းထား” ရှိပါတယ် “s ကို” နှင့်သင်ရုံတစ်ဦးချင်းစီကိုသင်လေ့လာသင်ယူလမ်းစကားလုံးကိုသုံးပါလျှင်, ပျောက်ဆုံးခံရ, ဒါပေမယ့်ထားသောစာပိုဒ်တိုများအတွင်းသင်မှန်ကန်စွာကြောင်းစကားလုံးသုံးစွဲဖို့သင်ယူခြင်းနေကြတယ်. သင်ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိရန်မလိုအပ်ပါဘူး. ကလေးများစာကြောင်းသိမ်းသွင်း.
ဥပဒေ2– သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလေ့လာမနေပါနဲ့. ဤသည်အစွန်အဖျားလူများစွာအံ့သြ! သငျသညျသဒ်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလေ့လာနေခြင်းဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူကြသင့်ရဲ့ဘဝတစျခုလုံး, ဒါပေမယ့်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ကအလုပ်လုပ်ခဲ့? ယခုသင်အလွယ်တကူအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်မည်? တစ်စုံတစ်ဦးကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်လိုက်တဲ့အခါ, ကျွန်တော်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဖြစ်ရမည်နှင့် preposition ရှေ့ဆက်စဉ်းစားရန်အချိန်မရှိဘူး, တင်းမာနေ, စသည်တို့ကို. သူတို့သဒ္ဒါသင်ယူဖို့ကျောင်းမသွားခင်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုအတွက်ကရှည်လျားစကားပြောဆိုရန်စတင်နေလျှင်, အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်အတူတူမပွုနိုငျ? အလေ့အကျင့်ရှိ, သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောဆိုရန်ထက်ရေးသားဖို့ပိုမိုအသုံးဝင်များမှာ.
ဥပဒေ3– သင့်ရဲ့နားရွက်မဟုတ်ဘဲသင်၏မျက်စိကနေသင်ယူပါ. ဒါကအရေးကြီးဆုံးစည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်! ကြား, ကြား, နားထောင်ရန်နှင့် ပို. ပို. အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောဆိုရန်သော့ချက်ကိုနားထောငျ. ဒါဟာသင်ဝေါဟာရသင်ယူလိမ့်မည်ဟုကြား, သဒ်ဒါ, ကြှမျးကငျြစှာပွောဆိုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အသံထွက်ကိုနားလည်. ကျောင်းများပြဌာန်းစာအုပ်ပေါ်မှာအာရုံနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်သွန်သင်ကြပြီ; ဆိုလိုသည်မှာမျက်စိကိုထံမှလေ့လာသင်ယူနှင့်မိန့်ခွန်းထက်အများကြီးပိုအရေးအသားနှာ. native သင့်ရဲ့နားရွက်နှင့်အတူအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်, ကြားနာ, နားထောင်ခြင်းနှင့်ကြားနာ.
ဥပဒေ4– rote နေဖြင့်လေ့လာပါ. ကျော်ပြန်လုပ်နှငျ့သငျယူခဲ့ရာကျော်. ဤသည်အလိုအလျှောက်ပါအကြောင်းအရာများကိုသင့်ရဲ့စိတျထဲမှာလုံလုံခြုံခြုံများမှာဖြစ်ပေါ်စေသည်. အများစုမှာကျောင်းများအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ကျောင်းသားများကိုတွန်းအားပေးနေကြသည်, ဝေါဟာရတိုးမြှင့်ဖို့အပတ်တိုင်းပိုပိုပြီးသစ်ကိုစကားများချပြီး. အဆိုပါပြဿနာကျောင်းသားကိုသင်လေ့လာသင်ယူနီးပါးအရာအားလုံးကိုမေ့လျော့သို့မဟုတ်ပဲအခြေခံအယူအဆသတိရကြောင်း, ဒါပေမယ့်ထိထိရောက်ရောက်မယ့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက်အသုံးပြုရန်မနိုင်. ထိုအခါ, သငျသညျအထပျထနှေးကွေးခြင်းနှင့်သင်ထပ်မံလေ့လာသင်ယူကြရာခပ်သိမ်းကိုပြန်လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်. ဒါဟာပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူး! သငျသညျနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာသင်ယူရမယ် (စုပေါင်းစေ), ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ကြောင့်မေ့လျော့ခြင်းနှင့်ဘယ်တော့မှရန်သင်ယူ, ထိုအခါ, တကယ်ကကိုသုံးနိုင်သည်. သင်ရုံထက်ပိုအထပ်ထပ်လိုအပ်ပါတယ်!
ဥပဒေ5– တိုတောင်းသောဇာတ်လမ်းများထဲမှာအမွငျခွငျးအားဖွငျ့သဒ်ဒါသငျယူပါ. ဒါဟာတူညီတဲ့ပုံပြင်ပြောပြခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်အမွငျပြောင်းလဲနေတဲ့, အခြားစကား, ပြောင်းမပစ္စုပ္ပန်, အတိတ်နှင့်အနာဂတ်. ဤသည်သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလေ့လာနေခြင်းမရှိဘဲသဒ္ဒါကိုသင်ယူဖို့နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဥပမာအား: (1) ဒီနည်းကို: ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်, သူ၏နာမဘီလ်ဖြစ်ပါသည်. ဘီလ်စတိုးဆိုင်ကိုသွားပြီး. သူကရေတစ်ပုလင်းကိုဝယ်မည်. သူကရေကိုနှစ်ဦးကိုဒေါ်လာချေ. (2) အတိတ်: ဘီလ်အမည်ရှိကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့သည်. မနေ့က, သူစတိုးဆိုင်သို့သှားကွ၏. ထိုသူသည်ရေကိုတစ်ပုလင်းဝယ်. သူကရေကိုနှစ်ဦးကိုဒေါ်လာပေးဆောင်. (3) အနာဂတျ: ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိလိမ့်မည်. သူ၏နာမဘီလ်ဖွစျလိမျ့မညျ. သူကစတိုးဆိုင်ကိုသွားမယ့်သူရေတစ်ပုလင်းမဝယ်ပါလိမ့်မယ်. သူကရေကိုနှစ်ဦးကိုဒေါ်လာပေးဆောင်သွားမယ့်. ဒါကြောင့်, သင်မကြာခဏဤအပုံပြင်များကိုနားထောငျ, ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်, နှင့်သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအများကြီးသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောတင်းမာနေဖြစ်လျက်ရှိစဉ်းစားရန်ရှိသည်မဟုတ်.
ဥပဒေ6– အင်္ဂလိပ်လိုတကယ်သာပစ္စည်းများ အသုံးပြု. လေ့လာ. ယင်းကအသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားပါ. ဖတ်စာအုပ်များဖတ်ရှုဖို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောများမှာ, သို့သော်, သငျသညျအင်္ဂလိပ်ကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျကိုခံစားသောအရာတစ်ခုခုကိုရွေးပါ, ကြောင်းလွယ်ကူပြီးပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်. ဆိုလိုသည်မှာစာဖတ်ခြင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကြင်နာမယ့်. သို့သော်နားထောင်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့သတိရ. Listen ဖြစ်ရမည် 80% သူတို့ရဲ့လေ့လာသင်ယူမှုများ. သင်အကြိုက်ဆုံးဘာသာရပ်အကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လို podcast နားထောင်ခြင်းကြိုးစားပါ. အသံစာအုပ်တွေလည်းသင့်ရဲ့နားထောင်လေ့ကျင့်ဖို့အခြားအကြီးအလမ်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သမိုင်း၏သားသမီးရဲ့စာအုပ်များနှင့်အတူစတင်နားထောင်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးခေတ်မီအဆင့်ရောက်ရှိသည်အထိနားထောင်ခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်း, သငျသညျက CNN ကိုနားထောင်နိုင်မည့်, ဘီဘီစီ, TV ပေါ်မှာရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲ. စစ်မှန်သောပစ္စည်းများကိုမဟုတျဘဲအင်္ဂလိပ်သင်တန်းများ CD များနားထောင်ပါ.
ဥပဒေ7– နားထောင်ခြင်းနှင့်တိုတောင်းသောပုံပြင်များကိုတုံ့ပြန်ရန်သင်ယူပါ. အစဉ်အလာကျောင်းနားထောငျဖို့နည်းလမ်းနှင့်အထပ်သင်ပေး (ထပ်နားထောင်ရန်-and). ဥပမာအား, ဆရာကပြောပါတယ်: ငါ့နောက်ကိုပြန်လုပ်, “hi, နေကောင်းလား?”, လူအပေါင်းတို့သည်အတူတူအတူတူပြန်လုပ်. သငျသညျရိုးရှင်းစွာစစ်မှန်သောဆက်သွယ်မှုကိုမရှိဘဲထပ်ခါထပ်ခါနှင့်, တခါတလေ, နားလည်မှုမပါဘဲ. ဤအမှုကိုမပြုပါနှင့်! တစ်ဦးကပိုပြီးအစွမ်းထက်နည်းလမ်း: နားထောင်ရန်နှင့်တုန့်ပြန် (နားထောင်ပြီးဖြေပါ). ဒီ technique ကိုနားထောင်ရန်နှင့်တုံ့ပြန်ရန်အဘို့အ, ဆရာတစ်ဦး Mini-သမိုင်းရှိပြီးအများအပြားလွယ်ကူသောမေးခွန်းများကိုစေသည်, လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှု, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုစကားနှင့်. ဥပမာအား, ဆရာလို “class, ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့. ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့?” သငျတို့သလျင်မြန်စွာပြောပါ “ဟုတ်ကဲ့, ဟုတ်ကဲ့“. ဆရာမကပြောပါလိမ့်မယ် “ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့သည်သို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးရှိခဲ့ပါသည်?” သငျတို့သအဆင်သင့်အဖြေ “ကောင်လေးတစ်ယောက်, ကောင်လေးတစ်ယောက်“. ဆရာမကပြောပါလိမ့်မယ် “ah, ဟုတ်လား, ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့. သူ၏နာမကိုအဘယျသို့ခဲ့?” သငျသညျနာမတျောကိုမသိရပါဘူး, ထို့နောက်တူတစ်ခုခုကန် “ယောဟနျသ“, သို့မဟုတ် “ဂျင်မ်“. ဆရာမကပြောပါလိမ့်မယ် “ah, ဟုတ်ကဲ့, သူ၏နာမယောဟနျသခဲ့“. ပြီးတော့ပိုပိုပြီးမေးခွန်းများကိုဆက်လက်, အင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားတတ်ရန်သင်ယူနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့တုံ့ပြန်, မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ.
links အင်္ဂလိပ် (အက်ခရာစဉျအမိန့်)
သဒ်ဒါ, စကားစု, ဗီဒီယိုများ, အသံဖိုင်များ, စသည်တို့ကို. အသံနှင့်အတူကျမ်းကိုလိုက်နာပါ.
အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ရရှိနိုင်အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာဆရာ, ဆရာမ, ချိန်းစောင့်ဆိုင်းတူမကျင့်သောသူတို့အဘို့အကြီး.
Curso ပါမောက္ခ A.J ပြုပါ. အတော်ကြာသင်ခန်းစာများဗီဒီယိုများနှင့်အတူ Hoge, podcast တခုကို, စကားလက်ဆုံ, ဆောင်းပါးများ, vocabulários.
– MP3 ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
100 သင်ခန်းစာများ, 1000 ဘုံစာပိုဒ်တိုများ, 1500 အသုံးအများဆုံးစကားလုံးမြား, အားလုံးအသံနှင့်အတူ.
အင်္ဂလိပ်စာအခမဲ့ video သင်ခန်းစာများ! ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းInglêsအဖြစ်ခေါင်းစဉ်များ, ရိပ်မိခြင်း, ယဉျကြေးမှု & အကြံပေးချက်များ, အသုံးအနှုန်းတွေ, သဒ်ဒါ, IELTS ဖြေ, အသံထွက်, ဘန်းစကား, ပြောရမယ်ဆိုရင်, TOEFL, TOEIC, ဝေါဟာရကeအရေးအသား.
အဘယ်သူမျှမမှတ်ချက်လိုအပ်ပါတယ်: အကောင်းဆုံးကိုအွန်လိုင်းဘာသာပြန်ဆိုသူ (အသံနှင့်အတူ) ဘာသာပေါင်းစုံ. ဘာသာပြန်ဆိုအပြင်, နားထောင်ခြင်းနှင့်အသံထွက်လေ့ကျင့်ဖို့လည်းအဲဒါကိုအသုံးပြုပါ.
နောက်ထပ်အေးမြအင်္ဂါရပ်စကားအသုံးအနှုံးစာအုပျဖွစျပါတယျ (အသုံးအနှုန်းတွေအဘိဓါန်), သင်တို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်စကားများစာရင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်.
ဒါဟာဂိမ်းနဲ့တူရဲ့! တစ်ဦးကဂီတ (ကလစ်) ကွင်းနှင့်သင်ဆက်လက်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီ keyword ကိုပြန်သွားဖို့လိုအပ်, ကြားသိ မူတည်. / နားလည်သဘောပေါက်သို့မဟုတ်မ.
အသစ်တစ်ခုကိုစကားလုံးတစျနေ့ကိုလေ့လာပါနှင့်တည်းဖြတ်မူများကိုအောင်. ဒုတိယဘရောက်ဇာကိုပင်မစာမျက်နှာအဖြစ်နေရာ cool.
$2/ ဇထံမှ Skype ကိုမှတဆင့်အင်္ဂလိပ်ဆရာကိုရှာပါ.
တဦးတည်းလုပ်ပုံကိုလည်းကြည့်ရှုပါ လြှော့ခွငျး 30% သင့်ရဲ့လူတန်းစား Preply အတွက်!
(သင်လျှော့စျေးနဲ့ window ကိုကြည့်ရှုမထားဘူးဆိုရင်, သင့် browser ၏ cache ကိုရှင်းလင်းသို့မဟုတ်တစ်ရုပ်ဖျက်ဝင်းဒိုးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်)
Fox ကသတင်း Talk ကို
Whashington သတင်းများ – WTop
စကားပြောဆိုမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဘာသာစကားများအတွက်အသိုင်းအဝိုင်းသင်ယူခြင်း (ချက်တင်ကewebcam). ဒါဟာမိတ်ဖက်များ၏ကြင်နာမယ့်: သငျသညျအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူနှင့်ပေါ်တူဂီသွန်သင်. ပိုကောင်းတဲ့နားလည်ရန်, ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှု “တစ်ဘာသာစကားများချိန်းသလားလုပ်နည်း”.
– မိန့်ခွန်း Yard
– ကို TED (အလွန်ကောင်းမွန်သော)
– စတီဖင် Colbert
– ဂျင်မီ Fallon
– ဂျင်မီ Kimmel
အမေရိက၏စကားသံကို – အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ
အသံနှင့်အတူသတင်းက်ဘ်ဆိုက်. သင့်အနေဖြင့်တစ်ဦးဘာသာရပ်ရွေးချယ် click နှိပ် “ကစား” စာသားအောက်ပါနေစဉ်အသံကစားရန်.
Voscreen – ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ
မှတ်ဉာဏ်ကဒ်စတိုင်အုပ်စုများ / ဝေါဟာရစာရင်းဖန်တီးရန်အသုံးပြု Software များ, ယင်း၏ဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူစာသားကို / စကားလုံးပေါင်းသင်းခြင်း. ဒါဟာသင်ပုံရိပ်တွေနဲ့ audio ထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုနှငျ့သငျလညျးအခွား၏အဆင်သင့်လုပ်စာရင်းများကိုသုံးနိုင်သည် (စာရေးခုံ).
– ဆိုက်ကို: https://ankiweb.net/
– စာရေးခုံ: https://ankiweb.net/shared/decks/english
ဘလော့ပါမောက္ခပြုပါ. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အင်္ဂလိပ်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူ Adir Ferreira.
– ဆိုက်ကို: https://www.youtube.com/user/adirferreiraidiomas/
– ယူကျု့ချန်နယ်: https://www.youtube.com/user/adirferreiraidiomas
အင်္ဂလိပ်ကလေးများနှင့်အရင်ကဆိုရင်ရည်ရွယ်အပြန်အလှန်လှုပ်ရှားမှုများရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူအမေရိကန် site ကို (1 အခမဲ့တစ်လ).
ဒါဟာလေ့ကျင့်ခန်းရာပေါင်းများစွာအတူတကွဆောင်တတ်၏ (အထူးသဖြင့်ကလေးတွေ) အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရန်
စကားပြောဆိုမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အများအပြားဗီဒီယိုများနှင့်အတူပါမောက္ခလီယိုနာဒို Leite ၏ Youtube ကိုရုပ်သံလိုင်း.
အကြံပေးချက်များနှင့်အတူဆိုက်, သငျသညျအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရန်အဘို့အပစ္စည်းများနှင့်အတန်း. တစ် Make tour.
ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးဂုဏ်သတင်းနှင့်အရေးကြီးသောတစ်ဦးအဖြစ်ဗြိတိန်အဆင့်မြင့်ပညာရေး၏ဤအစဉ်အလာအဖွဲ့အစည်းအများအပြား features တွေ.
အတူပါမောက္ခ Ana Luiza 50 အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာများ. အီးမေးလ်ဖြင့်အကြံပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်မှတ်ပုံတင်မယ်. တစ် Make tour.
Linguee – အင်္ဂလိပ်ပျေါတူဂီအဘိဓါန်
ကင်းဘရစ် – အဘိဓါန်အင်္ဂလိပ်ပျေါတူဂီ
ESOL အကူအညီ – အွန်လိုင်းရုပ်ပုံအဘိဓါန်
Longman ဓာတ်ပုံအဘိဓါန် 3rd Edition ကို
အဘယျကွောငျ့ technique ကိုနားလည်သဘောပေါက် “Visual အတွေးအခေါ်” အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမှု၌သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ.
အပြန်အလှန်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူသင်တန်း, Android နှင့် iOS အတွက် App ကိုနှင့်အတူ. စာရင်း!
ငါ elllo (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာကြည့်တိုက်အွန်လိုင်းနားထောင်ခြင်း) သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ပေးဖို့ဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖိုင်တွေအပေါ်သင်ခန်းစာများရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူအွန်လိုင်းမှစာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ် “နားထောင်ခြင်း”.
အများအပြားသင်ခန်းစာများနှင့်အတူကျဘျဆိုကျ, ဗီဒီယိုက, အသံနှင့်အကြံပြုချက်များ.
podcast နှင့်အတူဘရာဇီးလ်ဘလော့, ပို့စ်များကိုအများအပြားအင်္ဂလိပ်အကြံပေးချက်များ.
အိတ္စပရပ္Inglêsအတွက်သင်ခန်းစာများကိုသင့်အီးမေးလ်ကိုတိုက်ရိုက်သငျသညျကိုသွား, အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့် e-book အပြင်.
ပါမောက္ခနည်းပြရှိန်ကောင်းစွာနားထောင်ခြင်းအလုပ်ဖြစ်တယ် / အသံထွက် (DDM သင်တန်းများနှင့် pIRF), အဖြစ် podcasts တွေကိုနှင့်ဗီဒီယိုများကို.
သဒ်ဒါ, စကားစု, အသံဖိုင်များ, ဂိမ်းများနှင့်အများအပြားအပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ခန်း.
UOL – အင်္ဂလိပ်သင်တန်းအမှတ်စဥ်
အထူးသဖြင့်အတန်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအုပ်စုတစ်စု (သို့မဟုတ်မှတျတမျးတငျထား) စတိုင်ဗီဒီယို (အချိန်ဖြုန်းသည်).
စုစုပေါင်း access: 14683
6 စက်တင်ဘာလ 2014 တေလာ Lopes	အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ, english, အင်္ဂလိပ်, အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ
2 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း “အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူ: ဘယ်မှာစတင်ရန်?”
သမ္မတကတော် Susy ကပြောပါတယ်:
6 ဇွန်လ 2015 သို့ 14:51
Claudio Vaz ကပြောပါတယ်:
ငါ post ကိုခံစား, အများကြီးစုစည်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းစွာ.
24 ဒီဇင်ဘာလ 2016 သို့ 19:18
မူပိုင်ခွင့် © 2021 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 2.776.228 ဝင်ရောက်ခွင့်